၂၀၁၂ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်း... | နေမင်းဇွဲမာန်
၂၀၁၂ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်း...
Christy Walton ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ $26.5 billion ရှိပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းမှာ ခြောက်ယောက်မြောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Reliance Industries တွေရဲ့ Managing Director တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး $27 billion ပိုင်ဆိုင်ပါတယ် ။ Reliance Industries တည်ထောင်သူရဲ့ သားတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ပညာသင်ကြားနေတဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာပဲ အမွေများစွာကို ရရှိခဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။
Eliezer Batista ဆိုတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ရဲ့ သား ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ EBX Group ရဲ့ အဓိက ဆုံးဖြတ်ခွင့် အာဏာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး $30 billion ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။
7. The Clothing Business Tycoon –
Amancio Ortega ကတော့ fashion လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး $31 billion ပိုင်ဆိုင်ပါတယ် ။ Inditex Group ရဲ့ အဓိက ဆုံးဖြတ်ခွင့် အာဏာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။
6. The Owner of Largest Steel –
Lakshmi Mittal ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ India, United Kingdom, နဲ့ Asia မှာ အချမ်းသာဆုံး တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး $31.1 billion ပိုင်ဆိုင်ပါတယ် ။ India မှာမွေးဖွားခဲ့ပေမယ့် London မှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ Arcellor Mittal အဓိက ဆုံးဖြတ်ခွင့် အာဏာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံ သာမက Goldman Sachs ရဲ့ Director တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ Board of Directors of European Aeronautic Defence and Space Company ရဲ့ မန်ဘာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး မဂ္ဂဇင်းတော်တော် များများရဲ့ အသိအမှတ်ပြု ခံရသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Oracle Corporation ဆိုတဲ့ software company တည်ထောင်သူ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်မှာ တတိယမြောက် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ ငယ်ဘဝတွေမှာ သူရဲ့ မွေးစား အမေ သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာ စိတ်ပါဝင်စားမှု နည်းခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်း Chicago တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့ အချိန် ကွန်ပျူတာ ဒီဇိုင်းတွေကို စတင်ထိတွေ့ရာမှ သူဘဝပြောင်းလည်း လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ဥရောပရဲ့ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး $ 41 billion ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပြီး LVMH နဲ့ Christian Dior SA ရဲ့ ဥက္ကဌ လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ သူရဲ့ fashion ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ကူးညဏ်တွေကြောင့် ၂၀၁၁ မှာလည်း Fashion Person အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ပရဟိတအလှူရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး ပထမ နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ $50 billion ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။
တက္ကသိုလ်ပညာကို အဆုံးတိုင် မပြီးမြောက်ခဲ့ပေမယ့် မိမိဘဝကိုအောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ သူတွေထဲမှာ Mr. Bill Gates လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ။ ယခုလက်ရှိမှာ Microsoft company ရဲ့ ပိုင်ရှင် ဖြစ်ပြီး သူရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ $56 billion ရှိပါတယ် ။
အသက် ၁၂ အရွယ်လောက်ကတည်းက ဖခင်ရဲ့သင်ကြားမှုတွေနဲ့ အတူ စီးပွားရေးလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး နေရာမှာ ရပ်တည်နေခဲ့သူကတော့ Mexico နိုင်ငံသား Carlos Slim ဖြစ်ပါတယ် ။ Telmex, Grupo Carso, and America Movil တွေရဲ့ ဥက္ကဌ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး $74 billion ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။